Dilkii Sheekh Ibraahim Cali Xaashi oo weli baaritaan lagu wado
Xiisad ayaa weli ka jirta magaalada Nairobi, taas oo ku saabsan dilkii shalay subax loo geystay saddex nin oo Soomaali ah oo nin ka mid ah uu ahaa ergada rasmiga ah ee shirka dib u heshiisiinta Soomaaliya.
Ninkan oo lagu magacaabi jiray Sheekh Ibraahim Cali Xaashi, loona yiqiin Sheekh Ibraahim Xuub-Caaro waxaa lala dilay darawalkiisii iyo nin kale oo ganacsade ah iyagoo maraaya waddada dheer ee Kajiado ee duleedka magaalada Nairobi.
Waxaa kaddib maydkooda laga helay meel u dhexeysa xerada Mbagathi iyo magaalada Nairobi oo hawd ah. Booliska ayaa sheegay in ragga la dilay ay xabbaduhu uga yaalleen madaxa iyo xabbadka.
Gaarigii ay wateen ayaa la helay, waxaana boolisku ay ku warrameen inay baarayaan dhacdada. Maydkoodu weli waxa uu yaallaa isbitaalka Kenyatta, halkaas oo la geliyey qaboojiyaha. Qoyska uu ka dhashay Sheekh Ibraahim ayaa u sheegay weriyeyaasha inay waayeen habeen hore abbaarihii 07:30 fiidnimo.
Televisionnada waddankan ayaa ku soo cel-celinaya maydkii Marxuumkaas iyo dadka lala dilay. Illaa iyo hadda lama oga cidda ka dambaysa dilkiisa, hase ahaatee, saxaafadda waddanku waxa ay daabaceen in kooxo burcad ah oo hubeysan lagu tuhmaayo dilkaan.
Dilka Sheekh Ibraahim oo ahaa xildhibaan ka tirsan TNG, kana mid ahaa ganacsatada waaweyn ee magaalada Muqdisho waxa uu naxdin iyo welwelba ku abuuray ergooyinka shirka dib u heshiisiinta iyo Soomaalida ku nool Kenya.
Ibraahim Cali Xaashi wuxuu ahaa ninkii wada hadallada nabadda wakiilka uga ahaa Madaxweynaha dowladda KMG ah, Cabdilqaasim Salaad Xasan. Magaalada Ceel-buur ayuu ku dhashay, halkaasoo uu ka ahaa sheekh caan ah, intii uusan ku soo biirin howlaha ganacsiga.
Shirkadda Towfiiq oo mucaawinada hay’adda WFP ka qaadda Mombassa ee geysa Soomaaliya ayuu sidoo kale wakiil uga ahaa Nairobi. Ugu yaraan afar xaas iyo carruur badan ayuu ka geeriyooday.
Guddoomiyaha Guddida Farsamada IGAD, Bethuel Kiplagat oo maydka ku booqday isbitaalka Kenyatta waxa uu weydiistay booliska inay soo ogaadaan cidda falkan ka dambaysay, gaar ahaan haddii uu la xiriiro siyaasad. Boolisku, waxa ay ballan-qaadeen inay baaritaankooda sii wadayaan.
James Kiboi oo u qaabilsan Wasaaradda Arrimaha Dibadda Kenya wada hadallada Mbagathi, waxa uu maanta ku booriyey ergooyinka shirka Soomaalida inaysan is gelinin dhiillo iyo walaac, maadaama hay’adaha ku shaqada leh ay baari doonaan falka lagu dilay saddexdaas qofood.
Laba bilood ka hor ayaa nin isna ka mid ahaa ergada shirka waxaa ku dhaawacay xaafadda Eastleigh ee magaalada Nairobi koox tuugo ah oo ku hubeysan bistoolado, waxaana ay ka qaateen cell phone iyo lacag uu watay.
... had spurned the talks in July, accusing a committee steering the peace conference
and other Somali delegates of sanctioning the "dismemberment" of Somalia. ...
Three Somali delegates at peace talks murdered in Kenya - Xinhua
Somali peace talks delegate shot dead in Kenya
... He named the dead Somali as Ibrahim Ali Abdulle, a businessman and member of parliament
in a defunct transitional government for Somalia, which has been carved ...
Sheekh Ibraahin Cali Cabdulle oo Lagu diley Kenya.
Sheekh Ibraahim oo kamid ahaa xildhibaanada DKM ee jooga shirka Nairobi iyo laba qof oo kale oo toogasho lagu diley ayaa meydkoodii laga heley meel kayn ah oo kutaal Nairobi.
Qore: Mohamed Haji \_(Ingiriis\_)" ingiriis@yahoo.com
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland, Col. Cabdullaahi Yuusuf Axmed, Dr. Maxamed Sheekh Maxamuud Guuleed (Gacmadheere), Maxamed Xaashi Dhuxulow, Hilowle Imaam Cumar, Maxamed Dheere, iyagoo ku hadlaaya magaca ergooyinka shirka dib u heshiisiinta Soomaaliya waxay Tacsi tiiraanyo leh u dirayaan Allaha u naxariisto Sheekh Ibraahin Cali Cabdulle oo shalay ku geeriyooday magaalada Nairobi. Waxay Alle uga baryayaan inuu naxariistii Janno ka waraabiyo. Sheekhaas oo ahaa nin oday ah, kana mid ah xildhibaannada TNG waxay sheegeen in haddii Soomaaliya ay maanta dowladi u dhisnaan lahayd la baari lahaa dilkiisa.